प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पानी र साबुन छैन, कसरी मिचिमिचि हात धुने ? – Mission Khabar
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पानी र साबुन छैन, कसरी मिचिमिचि हात धुने ?
मिसन खबर १६ असार २०७७, मंगलवार १३:३८
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाईरसबाट जोगीन भन्दै एनटीसी र एनसेलका प्रयोग कर्ताहरुलाई मोवाईलको कलरटोन मार्फत जारी गरेको जनचेतनामुलक सुचनामा भनिएको छ–कोभीड १९ हामि जोकोही लाई पनि हुनसक्दछ, यस महामारिको समयमा सार्वजनिक स्थल वा कार्यलयमा जादा कम्तीमा दुर्ई मिटर दुरी अनिवार्य रुपमा कायम गरौँ, मास्क लगाऔँ र साबुन पानीले मिचिमिचि हात धौऔ वा सेनिटाईजर प्रयोग गरौँ ।
स्वाथ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न माध्यम मार्फत बारम्बार साबुन पानीले मिचिमिच हात धुन अनुरोध गरिरहेको छ । विश्व स्वाथ्य संगठनले पनि कोरानाबाट बच्ने मुख्य उपायका रुपमा साबुन पानीले बारम्बार हातधुन सुझाव दिदैआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ससंद बैठकमै निरोगी बन्नका लागि साबुनपानीले हातधुन सिकाउनु सामान्य कुरा नभएको भन्दै हात धुने संस्कारबारे सिकाउनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भित्रकै सौचालय र धारामा पानीको सुविधा छैन । टुटेफुटेका फाइप र सौचालयमा देखिने दृष्यले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई नै गिज्जाइरहेका छन् ।
यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । सिंहदरबारका धेरै मन्त्रालयका सौचालय तथा धारामा पानी र साबुन भेट्नै मुस्किल पर्छ । पुलचोकस्थित राष्ट्रिय पशुपन्छि श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालयको सौचालय त झनै बिजोक छ, यहाँ आवासिय सुविधा पाएका महिला कर्मचारी र उनीहरुका परिवारको महिला सदस्यको भित्रि कपडा समेत सौचालयमा राखेर सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई लज्जित बनाउने काम भएको छ ।
पुल्चोकस्थित सडक डिभिजन ललितपुरको कार्यालयको भुई तलाको सौचालयमा पानी त आउँछ तर साबुन खोज्दा कतै भेटिन्न । यी प्रतिनिधि सरकारी कार्यालय मात्रै होइन धेरै सरकारी अड्डा पानी नआउने, टुटुफुटेका, फोहोर सौचालय कार्यालय हुने अड्डाका रुपमा लामो समयदेखी परिचित छन् । सरकारी कार्यालय पुग्दा लाग्छ, फोहोर र भद्रगोल संरचना भनेकै सरकारी अड्डा हुन भन्ने ।
अधिकांशमा कार्यालयमा तापक्रम नाप्ने काम नै हुँदैन । नत सावधानीका लागि सेनिटाइजरनै राखिएको छ । कार्यालयका हाकीम बस्ने कोठा आसपासका सौचालयमा भने स्वास्थ्य सावधानीका पूर्वाधारको पँहुच देख्न सकिन्छ । सरकारले कोरोना रोकथामको स्वास्थ्य सावधानी सहित कार्यालय खुलाउन र बजारलाई चलायमान गराउन खोजेपनि सरकारी कार्यालयमै साबधानी अपनाएको देखिदैन ।
सरकार निर्देशन मात्रै दिने कि कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरेर कर्मचारीसँगै आम नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने ? सरकारी अड्डाको सौचालय र फोहोरले सरकार कति सफा र सभ्य छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिरहँदा के प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गम्भिर बन्नु पर्दैन ? आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।